इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव नहुँदो रहेछ सबैथोक । ओशो आश्रम तपोवन जाने इच्छा धेरै पहिलादेखि थियो मेरो । लामो काठमाडौं बसाइ र व्यर्थको व्यस्तताको कारण तपोवन जान सम्भव भइरहेको थिएन ।
गत हप्ता तपोवन जाने साइत जुर्‍यो । तपोवनबारे सुनेको थिए, बुझेको थिए र त्यहाँ नपुगेर पनि त्यसको अनुतूति भने अवश्य गरेको थिएँ । तपोपनमा आफ्नो भौतिक उपस्थितिपश्चात समय निकालेर तपोवनमा घण्टौं बास गर्नुपर्छ भन्ने बोध भयो ।
तपोवन जाने मानिसको कमी छैन । हरेक जात धर्मका मानिस त्यहाँ जाने गर्छन् । अर्थात् त्यहाँ मानिसको राम्रै उपस्थिति हुन्छ । यद्यपि तपोवन पुगेर एक विशेष अनुभूति हुने गर्छ । त्यो हो मानिसको भीडमा पनि एकान्तपनाको अद्भुत अनुभूति ।
काठमाडौंको कोलाहल, प्रदूषित हावा र भौतिकवादको अन्तहीन यात्राभन्दा भिन्न किसिमको उर्जाले भरिएको नागार्जुनस्थित झरना, हरिया पहाड, चराको सुरिलो रागले अकल्पनीय आनन्द प्रदान गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आम मानिसले बुझेर पनि अबुझ जस्तो गर्ने मृत्यु जस्तो अन्तिम सत्यबारे तपोवनले चेतनाको द्वार खोलिदिन्छ । त्यसको स्रोत हो गत वर्ष तपोवनका संस्थापक एवं सञ्चालक स्वामी आनन्द अरुणको मष्तिस्कको उपज ‘डेथ पार्क’ ।
पार्कभित्र दार्शनिक सोर्केट, देवकोटा, रबिन्द्रनाथ टेगोर, महात्मा गान्धीका तस्वीर र उनीहरूले मृत्युबारे दिएका अभिव्यक्ति प्रस्तुत मात्र गरिएको छैन, मृत्यु शैयामा स्वामी आनन्द अरुण आफैंलाई सुताएको कृत्रिम ‘स्ट्याच्यु’ राखिएको छ ।
यी सबै रचनाले मृत्यु वास्तवमै अन्तिम सत्य हो भने सहज भान गराउँछ । पार्कमा एकछिन एकान्तचित्त भएर बस्ने हो भने यसले धेरै हदसम्म मृत्युदेखिको भयलाई मनबाट हटाउन सहयोग गर्छ । अवश्यम्भावी मृत्युले यो पनि सिकाउँछ कि हामी वर्तमानलाई आनन्दमय बनाउँदै बाँच्नुपर्छ ।
संसारका सम्पूर्ण प्राणीमा दुःख छ । यी सबैका दुःखको कारण पनि छ । किनभने कुनै पनि भौतिक आध्यात्मिक वस्तु अकारण बनेका छैन्न । संसारका सबै वस्तु परिवर्तनशील छन् । मृत्युको कारण जन्म हो, जन्मको कारण तृष्णा हो र तृष्णाको कारण अज्ञान हो । दुःखका कारण नष्ट हुने हो भने दुःखको नष्ट पनि हुन्छ । यो पार्कले धेरै कुराको अनुभूति गराउँछ ।
मैले भ्याएसम्म सोधखोज गर्दा विश्वमा यस्तो पार्क नरहेको निचोडमा पुगे । विश्वका नौला एवं विलक्षण कुरालाई गिनिज बूकमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । के नेपालको भूमिमा निर्मित मृत्यु पार्कलाई गिनिज बूकमा दर्ता गराउन पहलको आवश्यकता छैन ? प्रचारको आवश्यकता छैन ? राज्यको सक्रियता खोज्नु हामी नेपालीको कर्तव्यभित्र पर्दैन ?
हामी कल्पना गरौं – यो पार्क पश्चिमा देशमा भएको भए अहिले विश्वको कुनाकुनामा यसको महत्त्वबारे चर्चा भइसकेको हुन्थ्यो होला । पश्चिमा देशमा मात्रै होइन, छिमेक राष्ट्र भारतमै भएको भए त्यहाँ सरकारी स्तरबाटै विभिन्न किसिमको अग्रसरता र पहलकदमी उठिसकेको हुन्थ्यो । तर हामी पूर्वीय सभ्यताका मानिस आफूलाई आधुनिक भएको दर्शाउन पश्चिमा सभ्यतासँग कृत्रिम सामिप्यता प्रदर्शन गर्छौं अस्वाभाविक तरिकाले ।
नेपाल इतरका देशमा भएका पार्कहरू रोयल बोटानिक, पार्क गुबेल, सेन्ट्रल पार्क, हाइड पार्कको खुब चर्चा गर्छौं हामी । आफ्नै देशका प्राकृतिक सम्पदाको बेवास्ता गरेर अमेरिका, युरोप सम्झिन्छौं ।
देशको पर्यटन मन्त्रालय मात्र होइन, सम्पूर्ण देश एक किसिमले पर्यटन वर्ष २०२० सफल पार्नको लागि आफ्नो क्षमता अनुसार लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ । तपोवन एउटा यस्तो आनन्दमयी आध्यात्मिक स्थल हो, जहाँ हजारौं पर्यटकको आवतजावतको निरन्तरता छ । नागार्जुन पर्वतको सानको रुपमा तपोवनलाई मान्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
प्रकृतिको काँखमा अवस्थित तपोवन प्रदूषणरहित र सुविधासम्पन्न स्थलको रुपमा रहेको कसैबाट लुकेको छैन । देशमा पर्यटन वर्ष २०२० को चर्चा भइरहँदा तपोवन छायाँ परेको अनुभूति हुनु आफैंमा असहजताको बोध गराउँछ । पर्यटन मन्त्रीजीलाई तपोवनमा निर्मित संसारकै लागि अदभुत हुनसक्ने ‘डेथ पार्क’बारे पुष्ट जानकारी छ वा छैन उनैलाई थाहा होला तर पर्यटन मन्त्रीजीलाई पार्कबारे विशिष्ट जानकारी हुनु अतिआवश्यक छ ।
यसले पर्यटन वर्ष सफलताको लागि एउटा प्रमुख आयामको भूमिका मात्र खेल्ने छैन, अपितु विश्वमा यसको प्रचार हुने हो भने सम्पूर्णतामा यसले देशको नाम उच्च गर्ने छ ।
तपोवनको ‘डेथ पार्क’ले नेपालको सनातन संस्कारको प्रदर्शन गरेको छ । पुर्वीय दर्शनले स्थापित गरेको सत्यलाई अहिलेको उत्तर आधुनिक युग र भौतिकवाद झाँगिदै गरेको समयमा आफ्नो संस्कार र सभ्यताको चिरहरण हुनबाट रोक लगाउन सकिन्छ र परमसत्य मानिने मृत्युलाई सहजरुपमा लिई वर्तमानलाई सार्थक बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको अनुभूति गराउँछ । यस्तो गहनतम् महत्त्व बोकेको पार्कबारे कति नेपाली सुसूचित छन् त ? पर्यटन मन्त्रालय यसबारे कतिको जानकार छन् ? यस्ता अस्वाभाविक सवालको वास्तविक उठान आफैंमा पीडादायी छ ।
अतः तपोवन आश्रमले स्वयं पनि ‘डेथ पार्क’को प्रचारको आयतनलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । देशका मिडियाले पार्कबारे सक्दो प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गिनिज बुकमा पार्कलाई स्थान दिलाउन सरकारको सार्थक पहलकदमी आजको माग रहेको छ ।